कफी नौगट - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू | थर्मो रेसिपीहरू
मिठाई132 मिनेट8 व्यक्ति215२ क्यालोरी
यदि तपाइँ मनपराउनुहुन्छ तीव्र स्वादहरु यो कफी नौगट संग मजा लिन तयार हुनुहोस्। नोटहरूको मिश्रण यति धनी छ कि यो तपाइँको मनपर्ने मध्ये एक बन्नेछ।
धेरै कफी उत्पादकहरू यस घरको बनाइएको नौगाटको साथ भ्रमित हुन जाँदैछन्। कफीको सूक्ष्मताहरू चकलेट र बादामको साथ पूर्ण रूपमा मिल्छ, बनाउँछ धेरै मौलिक संयोजन।
यो स्पष्ट छ कि यो चकलेट बच्चाहरु को लागी उपयुक्त छैन यद्यपि म पक्का छु कि तपाई आफ्नो अतिथिहरु संग धेरै सफल हुनुहुनेछ। पेटू र gourmets जो स्वादको आनन्द लिन सक्षम छन् अधिक वयस्क र नाजुक।
1 कफी नौगाट
2 के तपाइँ यो कफी नौगाट बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
तपाईंको सबैभन्दा गउरमेन्ट अतिथिहरूलाई चकित पार्नको लागि एक फरक र मौलिक नौगट आदर्श।
पिघ्न 100 सेतो चकलेट को g
G० ग्राम बटर (g० g + g० g)
G 250 ग्राम डार्क चकलेट
100 ग्राम बादामको पीठो (नुस्खा हेर्नुहोस्)
ताजा पकाएको बलियो कफी को 50 ग्राम
कफी बीन्स (वैकल्पिक)
हामीले काटेको सेतो चकलेटलाई गिलासमा राख्यौं र यसको लागि कुट्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 8।
हामी ब्लेड तिर चकलेट कम गर्छौं र मक्खन को 20 ग्राम थप्नुहोस्। हामी यसलाई प्रोग्रामिंग द्वारा पग्लन्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
पिघलिएको चकलेटलाई नौगट मोल्डमा हाल्नुहोस् र आवश्यक भएमा सतहलाई चिल्लो पार्नुहोस्। बाँकी नुस्खा बनाउँदा हामी फ्रीजरमा राख्छौं।
गिलास धोए बिना, गाढा चकलेट थप्नुहोस् र यसको लागि ग्रस्नुहोस् Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
हामी ब्लेड तिर चकलेट कम गर्छौं र मक्खन को 80 ग्राम थप्नुहोस्। हामी यसलाई प्रोग्रामिंग द्वारा पग्लन्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी बादामको आटा र कफी जोड्छौं। हामी समयमा मिश्रण गर्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 20।
हामी सेतो चकलेटको तहमा मिश्रण खन्याउछौं। चिकनी र कम्तिमा2घण्टाको लागि फ्रिजमा आराम दिनुहोस्।
सेवा गर्ने समयमा, हामी अनमोल्ड गर्छौं र कफी बीन्सले सजाउँछौं।
के तपाइँ यो कफी नौगाट बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
यो नौगाटमा धेरै राम्रा चीजहरू छन्: यो मौलिक छ, यो सामग्रीहरू संग बनाइएको छ जुन फेला पार्न सजिलो छ र, सबै भन्दा माथि, यो हो छिटो र सुपर गर्न सजिलो।
यसको अर्को विशेषता यो गर्न सक्छ अग्रिम गर। यसले तपाईंलाई सम्पूर्ण क्रिसमस मेनु व्यवस्थित गर्न पर्याप्त समय दिनेछ।
म सामान्यतया पार्टीहरूको हप्ता अघि नौगट बनाउँछु। द भ्याकुम प्याक र म तिनीहरूलाई सेवा गर्ने समय सम्म फ्रिजमा राख्छु।
यो एक प्रणाली हो धेरै व्यावहारिक र आरामदायक तर तपाईले यसमा पनि ध्यान दिनु पर्छ। तपाईंले प्याकेजिङ गर्न जानुभएको सतहहरू पूर्ण रूपमा सफा छन् र झोलाहरू नयाँ छन् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
ट्याब्लेटहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ। यदि तपाईंले कन्टेनर ट्याब्लेटमा टाँसिएको छैन देख्नुभयो भने, त्यहाँ सानो प्वाल वा खुला छिद्र हुन सक्छ। म सिफारिस गर्दछु कि तपाइँ सुनिश्चित गर्न कन्टेनर परिवर्तन गर्नुहोस् अधिकतम गुणवत्ता.
वास्तविक कफी यो नुस्खा मा प्रयोग गरिन्छ। जसलाई ए भनेर चिनिन्छ कालो कफी वा एस्प्रेसो जुन यसको सबै स्वादको आनन्द लिने उत्तम तरिका हो।
यो नुस्खा बनाउन को लागी तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ nougat ट्याब्लेट मोल्ड हुन काठ वा सिलिकन बनेको।
तपाईं खुला, सफा र सुक्खा दूध दफ्ती पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि मेरो मनपर्ने विकल्प आयताकार केक मोल्ड हो। हो, मलाई थाहा छ यो ग्लैमरस होइन तर नौगट ट्याब्लेटहरू हुन् निर्दोष। तपाईंले यसलाई भान्साको कागजको साथ लाइन गर्नु पर्छ र यो हो।
मोल्डमा निर्भर गर्दै, ट्याब्लेट हुन सक्छ उच्च वा तल्लो। यदि यसले सन्दर्भको रूपमा काम गर्छ भने, फोटोमा नाउगट 18 सेमी x 8 सेमीको आधारको साथ मोल्डमा बनाइन्छ।
यो नौगट सजाउँदा, आदर्श कफी बीन्स प्रयोग गर्न हो। तिनीहरू हुन सक्छन् प्राकृतिक कफी बीन्स वा त्यहाँ केही अनाज आकारका चकलेटहरू पनि छन् जुन ईश्वरीय छन्।
थप जानकारी - मितिहरू फोई ग्रास र खस्ता ह्यामले भरिएका छन्
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » क्रिसमसको » कफी नौगाट
नौगट केक र टोस्टेड जर्दी